Nezvedu | YingYee Machinery uye Technology Service Co., Ltd.
YingYee Machinery uye Technology Service Co., Ltd.ari nyanzvi simbi muitiro equipments. Isu tinotarisa pamusika wepasi rose uye tinoteerera nemitemo yepasi rese yebhizinesi nemirau zvakanyanya. Chikwata chedu chakasimba mukugadzira, kutsvagisa, kutengesa uye kushanda mune simbi maitiro ekushandisa. Mukurumbira wedu uye kuvimbika kwakasimba, nekuda kwevatengi feedbacks uye nekudzoka kwavo kune rimwe bhizinesi.
Ibasa redu kushandira vatengi vedu zvakanaka uye chengetedzo yavo yebhizinesi zvido. Isu tinovavarira kugadzira yekukunda-kuhwina mamiriro kune vese vatengi vedu uye kuyedza zvatinogona kudzivirira uye kubvisa chero zvingangoitika nyaya Mhedzisiro kubva kune vatengi vedu inozorapwa nenguva kune kwavo kugutsikana. Mukurumbira wedu wakasimba uye vatengi vanogutsikana kuratidzira kwemasevhisi edu akanaka. Iwe unogona kuverenga yedu inoenderera yakanaka masevhisi uye zvinotsigira.
YingYee akapa simbi muitiro michina kuti kunyika dzinopfuura makumi matatu, kunyanya muna US uye South America. Michina yedu nemasevhisi zvinonakidzwa nezvakanaka zvekudzosera kumashure kubva kune vatengi vakagutsikana vanodzoka kwatiri kune kubatana kwenguva refu Muchokwadi, iyo mwero wekutengazve inopfuura 80%.
Yese michina kubva kuYingYee yakafukidzwa negore rimwe garandi kubva pakutumirwa, pamwe nekusimba maintaince uye kugadzirisa rutsigiro.